Progressive Voice Myanmar » Governance Reforms
Home Our Work Governance Reforms
Thematic Priority – Governance Reforms
After decades of military dictatorship, institutions and governance structures in Myanmar remain undemocratic. This is exemplified by the military-drafted 2008 Constitution that entrenches the power of the Myanmar Army, the institution that still dominates the political arena and perpetuates armed conflict, displacement and chronic underdevelopment in ethnic nationality areas. As Myanmar is transitioning to democracy, the reform of key institutions such as the military, the administration system, the legislature, and judiciary is essential. We advocate forafederal system of governance, in which ethnic equality and equity is achieved throughalong-lasting peace settlement and the amendment of the 2008 Constitution.
Progressive Voice has producedanumber of reports under the thematic priority – Governance Reforms. The reports can be found at the bottom of this thematic priority areas.
ဦးစားပေးအကြောင်းအရာ။ ။ အုပ်ချုပ်ရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့သည့် စစ်အာဏာရှင်စနစ် နောက်ပိုင်းတွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အဆောက်အအုံပိုင်း ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများသည် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အခြေအနေတွင် ရှိမနေသေးပါ။ ထိုအချက်ဥပမာအား တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဒေသများတွင် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခအဓွန့်ရှည်ကာ အိုးအိမ်စွန့်တိမ်းရှောင်ရွှေ့ပြောင်းရခြင်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနိမ့်ကျရခြင်းတို့အတွက် တာဝန်ရှိကာ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတွင် ဆက်လက်ကြီးစိုးနေသည့် မြန်မာစစ်တပ်၏အာဏာအား ပိုမိုခိုင်မာစေရန် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲတွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားခြင်းအား ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် အထင်အရှားတွေ့နိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းဆဲ ကာလတွင် စစ်တပ်၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးကဲ့သို့ အရေးပါသည့် အဖွဲ့အစည်း အဆောက်အအုံများအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဆောင်ရန် မလွဲမသွေ လိုအပ်နေပါသည်။ မိမိတို့အနေဖြင့် ရေရှည်တည်တံ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြေရှင်းချက်မှတစ်ဆင့် တိုင်းရင်းသား တန်းတူညီမျှရေးအား ဖော်ဆောင် ပေးနိုင်မည့် ဖက်ဒရယ်စနစ် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးတို့အတွက် စည်းရုံးလှုံ့ဆော် လုပ်ဆောင်ပါသည်။
ရှေ့ပြေးအသံအဖွဲ့မှ ၎င်း၏ ဦးစားပေးအကြောင်းအရာများထဲ တစ်ခုဖြစ်သော – အုပ်ချုပ်ရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ အခန်းကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်ပြီး အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ ထိုအစီရင်ခံစာများကို အောက်တွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဦးစားေပးအေၾကာင္းအရာ။ ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေဆာက္အအံုပိုင္း ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီနည္းက် ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိမေနေသးပါ။ ထုိအခ်က္ဥပမာအား တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေဒသမ်ားတြင္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡအဓြန္႔ရွည္ကာ အုိးအိမ္စြန္႔တိမ္းေရွာင္ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းမ်ားႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနိမ့္က်ရျခင္းတုိ႔အတြက္ တာ၀န္ရွိကာ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ ဆက္လက္ႀကီးစိုးေနသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏အာဏာအား ပုိမုိခိုင္မာေစရန္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားျခင္းအား ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ အထင္အရွားေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းဆဲ ကာလတြင္ စစ္တပ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးကဲ့သုိ႔ အေရးပါသည့္ အဖဲြ႔အစည္း အေဆာက္အအံုမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ မလြဲမေသြ လုိအပ္ေနပါသည္။ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျဖရွင္းခ်က္မွတစ္ဆင့္ တုိင္းရင္းသား တန္းတူညီမွ်ေရးအား ေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏုိင္မည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတုိ႔အတြက္ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။
ေရွ႕ေျပးအသံအဖဲြ႔မွ ၎၏ ဦးစားေပးအေၾကာင္းအရာမ်ားထဲ တစ္ခုျဖစ္ေသာ – အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာမ်ားကို ေအာက္တြင္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။
The results of Myanmar’s second general elections since 2011, when fifty years of military rule came to an end, were announced by the Union Election Commission (UEC)aweek after the vote itself, which was held on 8 November 2020[…]
In less than two weeks, on 8 November 2020, the Myanmar public will take to the polls and cast their vote inanational election[…]
This submission isajoint submission by the below Burma/Myanmar civil society organizations that work on the issue of hate speech and/or are directly impacted by it[…]
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ ပုံမှန်သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲသို့ တင်သွင်းသော ပူးတွဲတင်ပြချက် – အမုန်းစကားများနှင့် ဒီမိုကရေစီနှင့် အရပ်ဘက်လူထုအသိုင်းအဝိုင်း၏အခန်းက ကျဥ်းမြောင်းလာခြင်း
ယခုတင်ပြချက်သည် အမုန်းစကားများပြန့်ပွားမှု ကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်နေသော နှင့်/သို့မဟုတ် အမုန်းစကားများ၏ တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုဒဏ် ခံနေရသော မြန်မာနိုင်ငံရှိ အရပ်ဘက်လူထု အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးတွဲတင်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။[…]
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေပုံမှန်သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲသို့ တင်သွင်းသော ပူးတွဲတင်ပြချက် – ဒုက္ခသည်များနှင့် ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရသူများ
ယခုတင်ပြချက်သည် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တစ်လျှောက်ရှိ ဒုက္ခသည်ကော်မတီများ၊ လူငယ်နှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရသူ တိုင်းရင်းသား လူထုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် နီးကပ်စွာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော တိုင်းရင်းသား လူထုအခြေပြု အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း (Community-Based Organization – CBO) များနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း (Civil Society Organization – CSO) များ၏ ပူးတွဲတင်ပြချက်ဖြစ်သည်။[…]
This submission isajoint submission by the below ethnic community-based organizations (CBOs) and civil society organizations (CSOs) that work closely with displaced ethnic communities, including refugee committees along the Thailand-Burma/Myanmar border, youth and women’s organizations, as well as local development and humanitarian organizations[…]